Isikhalo ngokunganakwa kwezilimi zomdabu kuleli – Bayede News
by Bayede News Posted on 12 January 2020 12 January 2020
Ngicela ukuphakamisa isandla kengibabaze engikubona kungumonakalo nenselelo mayelana nesithunzi sezilimi zethu thina boHlanga. Ngifisa ukuyingenisa kanje le ndaba! Yebo emva konyaka we-1994, lathi igama zonke izilimi seziyalingana futhi zonke sezisemthethweni. Ngeshwa lokhu akulandelwanga ukuguqula izenzo nomqondosimo kithina boHlanga esasesingenwe imfundiso yokuthi usuke ususezingezni eliphezulu noma elingcono uma ukwazi ukukhuluma isiNgisi noma isiBhunu, kanjalo futhi nakomakamangesandla wokuthi bayisizwe esingcono, okwenza bangasibona nesidingo sokuthi nabo bazifunde izilimi zethu.
Kule minyaka ngiphila, ngiye ngagcina sengiqaphela ukuthi empeleni alikho ibhuku noma itshe lapho kuqoshwe khona ukuthi leso naleso sizwe amasiko aso ahamba kanjani nokuthi izinto ezithile sizenza kanjani. Okuyiwona mthombo okhona ngalolu lwazi, ulimi lwebele olukhuluywa yileso sizwe. Olimini ilapho ufundiseka khona ngenhlonipho, isizotha, ukuthoba, ukuzehlisa, ukuzigqaja, ukushinga nokunye. Konke lokhu ukwazi ukukubona umbuka nje umuntu engashongo lutho noma ubuke indlela asho ngayo into bese ubona ukuthi lo uyahlonipha noma uzithwele njalonjalo.
Ngibheke la ngalesi sendlalelo, ukwehla kwesithunzi sezilimi zethu kudala umonakalo ongelinganiswe, omunye womonakalo nje singabala; ukwakheka nokomelela kwesithombe sokuthi kasilutho okugcina sesizenyeza ngaloko okungokwethu, size sikugxeke, ukutabalasa ezikoleni ngenxa yokuthi izifundo eziningi zifundiswa ngesilungu, ukwakheka phakathi kwezizwe zabansundu kweqeqeba labantu abathi bengaboHlanga kodwa ukwenza nokucabanga kwabo kufuze okwabelungu, uthole ukuthi bona baneqholo ngaloko.
Ukudlondlobala kwesilungu okuyizona zilimi ezisabhekelelwe kakhulu nasezikhungweni zikaHululmeni nezamabhizinisi, akubanga umyalelo kaNkulunkulu, kepha kwaba yisu langabomu ukuze lezi zilimi zigcine seziyizidlakela uma uqhathanisa nezinye izilimi. Umphumela walesi simo, futhi nokusaqhubeka, isithombe sokuthi labo okuwulimi lwabo lwebele isiBhunu nesiNgisi, bangcono noma bayizidalwa ezikhethekile, behlukile, kube kungenjalo. Usuvele mkhulu kakhulu umonakalo okhona esiwubona endleleni abantu abaphila ngayo.
Ngenxa yokuthi ulimi lungumthombo wamasiko nendlela ileso naleso sizwe esenza ngayo izinto, siyaqaphela indlela yokwenza nokukhuluma ebonakala ezinganeni zethu lezi ezifunda kulezi zikole obekwaziwa ukuthi ngezabamhlophe. Ngenxa yokuthi kulezi zikole kubusa isilungu, nazo zigcina sezincela amasiko esilungu.
Ukuhlala njalo ugxishwa olunye ulimi, uze uphoqwe ukuthi ukuze uthole umsebenzi kumele wazi lona, uthole ukuthi nakuzinhlolokhono ulimi oluthile ilona olusetshenziswayo, sekwatshalwa inkolelo ukuthi lezi zilimi zisho ubungcono. Izinto esizenzayo sezahlukana kabili, kubakhona okwesintu nokwesilungu, loku ukuthola uma kunemgcagco, noma imicimbi eyenziwayo. Esingakuqapheli ukuthi lobunxambili busiphundla kakhulu nasemalini, singene ezikweletini.
Ezindaweni eziningi kwimibuthano noma imicimbi, uthola ukuthi bonke abawuthamele ngabansundu noma ibona abayiningi kakhulu, kodwa uyothola ukuthi uhlelo lusingethwe ngesilungu, nasemabandleni uthole intshumayelo ingesilungu, oshumayelayo aze anonge lesi simo ngokubangathi uvukwa umoya. Kwesinye isikhathi uzwe umuntu ekhuluma kahle ngolimi lwakhe, uyothi uzwa uye lo esethi, ‘ukuze kuzwakale kahle ake ngichaze ngesilungu’. Yehheni!!! Abenzi baloku basuke bengaboni hlazo noma iphutha, futhi akumele sibasole, ngoba abazenzi, lokhu sekwangena emithanjeni yabo ukuthi isiNgisi sisho ubungcono nokuba sezingeni eliphezulu. Asize singabona ukuthi ngokwamukela le nkolelo, kahlekahle nathi siyazivumela ukuthi labo okuzilimi zebele kubo lezi, sithi, bangcono futhi baphezulu thina asilutho futhi ezethu izilimi azinasidingo.
Namuhla sibhekene nehlazo esesalemukela lokuthi uma uhlanganise ndawonye abeNguni, umPedi, umSotho, umVenda umTswana; ukuze laba bakwazi ukuxhumana bezwane, kugcina sekuphoqeka ukuthi kumele bakhulume noma basebenzise isilungu. Yebo lesi simo akuphutha lethu. Akuyiso isimo okumele sigcine sesivele sisamukele lesi, kubengathi vele kwakudaliwe.
Phinde ngiyala!! Lokhu kufanele sikubone njengomonakalo okhona, obiza ukuthi siwulungise thina ukuze siguqule izinto.
Kuningi okungenziwa ukuphendula lesi simo. Okukhulu okungajabulisa kungaba ukuthi ababusi nabaphathi bethu kebabe isibonelo ekuvuseni ugqozi olungasekho ngokuthi bona qobo bakuphile ukuthi bafukule izilimi zethu. Ababusi nabaphathi akebeqinisekise ukuthi njalo uma bakhuluma nathi basebenzisa ulimi lwethu, akukhathaleki noma usemsakazweni noma ukuthelevishini.
Iziphathimandla zethu kwezemfundo azike ziqalise uhlelo oluzokwenza ukuthi ezikoleni kuleso naleso siFundazwe kuphoqelelwe ukuthi ngaphezu kwalololimu olukhulunywa iningi kubuye kufundiswe nezinye izilimu ezimbili kulezi zabansundu, futhi nezifundo ezifundwayo zifundiswe ngolimi lwebele. Mhlawumbe omunye uzothi, eyi le nto ingadala umsebenzi omkhulu kubhalwa kabusha kubuyiselwe izincwadi ezilimini zethu, mina ngibona lokhu kuzodala amathuba omsebenzi futhi isiqalo esidingekayo lesi ukuze sibuyise isithunzi sethu. Lona ngumsebenzi obalulekile okudinga wenziwe ukuze siqalise siguqule izinto, sibuyise nokuzemukela, siqede ukuzenyeza, siphinde sebuze nalesi sikhumba sokuthi kunezinhlanga ezingcono kunezinye. Ukuqala kwethu ukukhuluma nokwenza ngokungazenyezi izilimi zethu, kuyoba isiqalo sokuzithola nokuzazi.
Onyakeni oqeda kuphela besibungaza iminyaka engu 25 saqala uhambo oluya ezweni lenkululeko nokusimama, ngithemba ukuthi eminyakeni engaphansi kakhulu kwale nathi boHlanga uyobe ususithola sikhuluma sodwa kepha sikhuluma noma luphi ulimi phakathi kwezilimi zethu. NasemaPhalamende, izishayamthetho, emikhadlwini yomasipala, ezinkantolo nasemasontweni sothola sekuyinhlalayenza ukusetshenziswa kwezilimi zethu